Mauritius Tourism Ministry na-atụ anya ka 5% too na ndị ọbịa na-abata
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mauritius Tourism Ministry na-atụ anya ka 5% too na ndị ọbịa na-abata
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mauritius na-adọta ndị njem na-arịwanye elu ma uto nke 5% na-atụ anya ugbu a na-ekwuputa Minista nke Njem Nleta Anil Gayan. Ọ nọ na-enwe nzukọ ndị nta akụkọ n'isi ụlọ ọrụ ya na Port Louis. Anil Gayan na-ekwuputa asọmpi akara ngosi dịka akụkụ nke Kreol International Festival emere maka November ọzọ.
A maara Mauritius, mba agwaetiti Indian Ocean, maka osimiri, ọdọ mmiri na mmiri. Ugwu ugwu ahụ gụnyere Ogige Ugwu Black Black Gorges, nke nwere oke mmiri ozuzo, nsụda mmiri, ụzọ ụkwụ na anụ ọhịa dị ka nkịta na-efe efe. Isi Obodo Port Louis nwere saịtị dịka Champs de Mars track ịnyịnya, Eureka plantation house na narị afọ nke 18 Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Gardens.
Gụnyere ọtụtụ ọdịbendị na nkwenkwe, Mauritius nwere ọtụtụ ememme na-eme n'afọ niile. Maka ọtụtụ ndị njem, ihe omume mpaghara na-akpali mmasị ha na ememe ndị a na-agwakọta na atụmatụ ezumike ha. Ememme na-enye ụzọ dị ụtọ iji mụta banyere nka, egwu, nri na ọdịnala nke mba ndị ọzọ. O doro anya na Mauritius bụ otu n'ime ebe ndị hụrụ ememe n'anya na Oke Osimiri Indian. N'ihi ọdịbendị dịgasị iche iche na ọdịnala ndị a na-akwanyere ùgwù n'oge ha, ememe a na-eme kwa afọ n'àgwàetiti ahụ na-egosi na ọ bụ n'ezie ebe na-agbaze ọdịbendị. Ememe ndị Mauritia nwere ume na-enweghị atụ dị ka ndị ọzọ; site na ntụrụndụ n'okporo ámá na oriri dị egwu, na ememe okpukpe dị nsọ - enwere ihe iji nwaa ndị na-agagharị agagharị nke afọ niile. Obi abụọ adịghị ya na ị ga-enwe obi ụtọ site na uwe na-enwu enwu nke ndị obodo na-eme iji mee ememme ọdịbendị na kaleidoscope nke agba agba bụ oriri maka anya.
Ihe ngosi na-enwu gbaa na ume ike nke ndị Mauritian kpatara ihe gbawara agbawa. Ihe ụtọ ndị na-atọ ụtọ ị ga-eri ga-ejikwa uto gị, site na-esi ísì ụtọ na-acha ọkụ ọkụ, ị ga-enwe ọtụtụ nri pụrụ iche. Obi abụọ adịghị ya na mmụọ na-efe efe na nnabata ọbịa Mauritian ga-ewetara onye nwere obi abụọ na ndụ ma hapụ ha ncheta iji dịrị ndụ. Yabụ, emela ihere ma sonyere igwe mmadụ ahụ ka ị nwee ume ma bie ezigbo ahụmịhe.
Agba na ume nke ememme na ihe omume ọdịnala na Mauritius dị ịtụnanya, yabụ ọ bụrụ na ị nweta ohere ịga otu, agafela ya!